Shirkii Magaalada Harar iyo Is mari waaga wali taagan(Sawiro) – Xeernews24
Shirkii Magaalada Harar iyo Is mari waaga wali taagan(Sawiro)
20. Mai 2019 /in WARAR/NEWS /von admin
Waxaa magaalada taarikhiga ah ee Harar kasocda shir lagaga xaajoonaya sidii xal loogu heli lahaa khilaaf ka dhashay go’aan uu gollaha wasiirada ee DDS bishan 3dii kasoo saaray 3 degmo oo si khaldan loogu wareejiyay maamulka Canfarta. Go’aanka maamulka Soomaalida ayaa lagu qeexay in lagaga noqday heshiiskii labada dhan dhaxmaray 2014kii. Gollaha wasiirada ayaa codsaday in dib loo eego heshiiskaas.
Madaxweynaha maamulka Herarida, Ordin Bedri, ayaa tibaaxay in dadka ku nool bariga wadanku yihiin walaalo islamarkaana wadaagan dhaqan iyo taariikh. Wuxuu intaas ku daray, in wixii khilaaf ah lagu dhameeyo wadaxaajood.
Madaxda DDS ayaa hadda kahor xaalada kala hadlay xukumada dhaxe iyaga oo ku adkaystay go’aankii gollaha wasiirada.
Xiisada degmooyinka muranku ka taagan yahay ayaa cirka isku shareertay kadib markii ciidamada gaarka ah ee Canfarta lagu eedeeyay dilka in ka badan 10 oo qof oo xoolo-dhaqato Soomali ah. Dilka ayaa ka dhacay gudaha ismaamulka Soomaalida.
Waxgaradka iyo dadweynaha 3 degmo ayaa xili dheer cabasho ka muujinayay cadaadiska iyo cabsida ay kala kulmaan maamulka Canfarta. Dadweynaha ayaa dhigay dibadbaxyo nabad ah oo ay ku codsanayaan inla hoos geeyo maamulka DDS si ay walaalahood ugu biiraan.
Waxaa jira tuhun ah in taageerayasha TPLF hurinayaan colaada Canfarta iyo Soomalida si loo abuuro amaandaro saameyn ku yeelata isu socodka gaadiidka iyo ganacsiga ee Ethiopia iyo Jabuuti. TPLF iyo maamulkeedi ayaa soo maleegay shirqoolkii hore ee dhulka Soomaalida loogu wareejiyay Canfarta.
Lama hubo natiijada kasoo bixi shirka Harar, laakiin waxaa hubaal ah in xalku ku jiro in afti laga qaado dadka ku dhaqan 3da degmo ee horay sharci darada loogu bixiyay.
Maamulka Canfarta ayaa horay u diiday go’aanka gollaha wasiirada ee DDS iyo eedeymaha loo soo jeediyay ciidamadooda gaarka ah.
Waxaa kulanka isugu yimid madaxda ismaamulada Canfarta, Herarida, Somaalida iyo masuuliyiin kasocda dawlada dhaxe. Waxaa kale oo shirka kasoo qaybgalay madaxda dhaqanka ee dhinacyada is haya.
Wadahadalkii Odayaasha labada Degaan ee Soomaalida ito Canfarta oo guul daro ku soo dhamaaday.
Waxaa ilaa maanta aan idiinla soo socodsiinaynay xaalada wada hadalka u dhexeeya labada degaan ee Soomaalida iyo Canfarta. Hadaba kulankii dhex maray odayaasha 2da dhinac ayaa noqday hal bacaad lagu lisay kadib kolkii cuqaasha Soomaalida ay gaashaanka u daruureen 3 shuruud oo geesta Canfartu la soo shir tageen iyagoo precondition uga dhigay wada hadalka.
3dan shuruud ayaa ahaa sidan
1) In Calanka Degaanka Canfarta dib looga taago saddexda degmo ee Cundhufo, Cadaytu iyo Garbo Ciise.
2) In Xabad joojin lagu dhawaaqo.
3) In Xukuumada DDS ay ka noqoto go’aankii Gollaha Fulinta ee dhawaan qaadatay ee khuseeyay sadexdaa degaamood.
Saddexdan shuruudood ayay cuqaasha Soomaalidu ku tilmaameen in Degaanka Canfartu uuna u soo jeedin nabad iyo xasilooni uu hadafkoosu yahay carqalad iyo qulqulato hor leh, kuwana ay yihiin wax aan la.aqbalayn
Dhanka Soomaalida ayaa waxaa shuruud u ahaa in Degaanka Canfartu sii daayaan maxaabista sharci darada ay u haystaan iyo inay ciidamadooda ka caagaan goobaha ay dadka ku xasuuqeen isla markaana sharciga hor keenaan dhamaan intii ka danbaysay xasuuqii Madane iyo Dan-lahelay.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2019/05/Shirka-Harar.jpg 720 960 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2019-05-20 00:48:022019-05-20 00:50:03Shirkii Magaalada Harar iyo Is mari waaga wali taagan(Sawiro)
Wax la yidhii bahasha ciyaarta hadday xeeladi ku jirin maxaa habeenkii loo ... Sacuudiga iyo Imaaraadka oo wajahaya xaalad adag iyo shir deg deg loogu baa...